२०२० मा कसरी राजनीतिक ब्लगर बन्ने - Print Peppermint
घर / डिजाइन ब्लग / असंगठित / २०२० मा कसरी राजनीतिक ब्ल्गर बन्ने
यदि तपाईं आफ्नो प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने विचार बाहिर र दर्शक निर्माण, एक ब्लग शुरू तपाईं गर्न सक्नु उत्तम कुरा हो। यो पूर्वानुमान कायम गर्दै केही पैसा कमाउने उत्तम तरिका हो। तर तपाईंले कार्यमा डुब्नु अघि तपाईंसँग एक हुनुपर्दछ स्पष्ट उद्देश्य को भावना र तपाइँ के गर्न जाँदै हुनुहुन्छ ठ्याक्कै थाहा छ। एक राजनीतिक ब्लग सुरु गर्न, तपाईं कसरी प्राविधिक जान्नुहोस् बारे सावधान हुनुपर्छ।
एक राजनीतिक ब्लगर को रूप मा, तपाईं सधैं अप-टु-डेट हुन कोसिस गर्नु पर्छ। एक राम्रो लेखक सामान्यतया एक भद्दा पाठक हो। उदाहरण को लागी, एक पठन पछि राजनीतिमा निबन्ध तपाईं भिन्न दृष्टिकोण हेर्न सक्नुहुनेछ, जुन ब्लगरको सफलताको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। प्रोफेशनल ब्लगरहरूले केवल बिभिन्न बिन्दुहरू मात्र स्वीकार्नु हुँदैन, तर पनि रक्षा उनीहरुको स्थिति। राजनीति मा निबन्ध तपाइँलाई राम्रो तर्क छ कि अपनाईयो गर्न सक्छ। त्यहाँ राजनीति मा धेरै मुक्त निबन्ध छन्। महान निबंध को केहि अन्य उदाहरणहरु खोज्न को लागी प्रयास गर्नुहोस्।
तपाई जति धेरै पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईको लेखन अझ राम्रो हुन्छ। ब्लगरको रूपमा तपाई नयाँ चीजहरू सिक्न सधैं तयार हुनुपर्दछ। कहिल्यै सिक्न रोक्नुहोस्। यस पोष्टमा, हामी एक राजनीतिक ब्लगर बन्ने विभिन्न पक्ष छलफल गर्न जाँदैछन्। तपाईं रूढिवादी ब्लगिंग वा उदार ब्लगिंगमा रूचि राख्नुहुन्छ भने, तपाईं यो पोस्ट उपयोगी पाउनुहुनेछ।
तपाइँको ब्लग को बारे मा छ?
तपाईं एक राम्रो हुनुपर्छ स्पष्ट विचार के तपाइँ तपाइँको ब्लग मा लेख्न को लागी जाँदै हुनुहुन्छ। हामी मान्दछौं कि राजनीति तपाइँको मुख्य फोकस हो। तर यदि तपाइँ तपाइँको ब्लग भीड बाट बाहिर खडा गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको विषय को बारे मा अधिक विशिष्ट हुनु पर्छ। तपाइँको लक्षित दर्शक को हो? के तपाइँ कलेज विद्यार्थीहरु वा महिलाहरु वा मार्क्सवाद को समर्थन गर्ने मानिसहरु को लागी लेख्दै हुनुहुन्छ?
तपाइँको लक्षित दर्शकहरु सम्म पुग्न, तपाइँ सकेसम्म विशिष्ट हुनुपर्दछ। सबैको लागि लेख्ने प्रयास नगर्नुहोस्। यदि तपाइँ त्यसो गर्नुहुन्छ भने, तपाइँसँग कुनै विशेष दर्शकहरू छैनन्।
तपाईले कस्तो प्रकारको सामग्री सिर्जना गर्नुपर्नेछ जब तपाईलाई थाहा हुन्छ कि तपाईको ब्लग पढ्ने को हो। एकचोटि तपाईंले स्थापित गर्नुभयो, तपाईं सजीलै आफ्नो निम्न बढ्न सक्नुहुनेछ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले आफ्नो भान्जीलाई एकदम स्पष्टसँग बुझ्नुभयो।
यदि तपाईंसँग तपाईंको श्रोताको गहिरो समझ छ भने, तपाईंलाई जडान स्थापना गर्न सजिलो हुनेछ। यदि तपाईं राजनीतिज्ञ होइन, तर राजनीतिमा चासो राख्ने व्यक्तिहरूका लागि लेख्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले राजनीतिमा हुने प्रत्येक चीजको बारेमा छलफल गर्नुपर्दैन। तर यदि तपाइँ राजनीतिमा सक्रिय रूपमा लागेका मानिसका लागि लेख्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ विवरणहरूको बारेमा धेरै होशियार हुनुपर्छ।
तपाईको ब्लग सुरू गर्न तपाईले केहि साधारण चरणहरु अनुसरण गर्नु पर्छ। अब हामी यी चरणहरू छलफल गर्नेछौं:
एउटा ब्लग प्लेटफर्म छनौट गर्नुहोस्
ब्लग प्लेटफर्मको चयन गर्नु भनेको तपाईंले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा हो। यो परम्परागत ब्लग प्लेटफर्म वा सफ्टवेयर हुन सक्छ। तपाईंको लक्ष्य संसारमा उनीहरूको सामग्री बाहिर निकाल्ने हो।
त्यहाँ ब्लगिंग प्लेटफर्मको कुनै कमी छैन, तर सबैभन्दा लोकप्रिय एक WordPress हो। WordPress वास्तवमा नि: शुल्क छ, तर तपाईंले सर्भर र डोमेन किन्नुपर्दछ। सेटअप प्रक्रिया सजिलो छ। तपाईं यो गर्न सक्षम हुनुहुनेछ यदि तपाईंसँग अनुभव छैन भने पनि। WordPress को अर्को ठूलो फाइदा यो हो कि यसले लगभग असीमित कार्यक्षमतालाई समर्थन गर्दछ। यो सुरक्षित र बलियो छ।
हामी वर्डप्रेसको नि: शुल्क संस्करणको सिफारिस गर्दैनौं, किनकि यसको सीमितता छ। जब तपाईं एक पेशेवर राजनीतिक ब्लग शुरू गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईंसँग आफ्नो ब्लगमा पूर्ण नियन्त्रण हुनुपर्दछ। नि: शुल्क सेवा प्रयोग गर्न गल्ती नगर्नुहोस्। निर्णयले तपाईंलाई पछि खुशी पार्दैन।
तपाईंको होस्टिंग सेट अप गर्नुहोस्
तपाईंको डोमेन नाम प्राप्त गर्न र होस्टिंग सेट अप गर्न ब्लूहोस्ट प्रयोग गर्नुहोस्। तिनीहरू सस्तो छन्, र सेट अप गर्न को लागी धेरै सजिलो छ। आजका दिन, धेरै डोमेन नामहरू उपलब्ध छन्। जब एक डोमेन नाम छनौट गर्नुहोस्, निश्चित गर्नुहोस् कि यो याद राख्न सजिलो छ। यदि यो भन्न सजिलो छ भने, व्यक्तिहरू तपाईंको ब्लगमा सन्दर्भ गर्दछ। र त्यो हुनेछ मदत तपाई पाठकहरुलाई आकर्षित गर्नुहुन्छ।
तपाईंको डोमेन र होस्टिंग समान स्थानबाट प्राप्त गरिनु पर्दछ। एक राजनीतिक ब्लग को लागी, BlueHost हाम्रो सिफारिश हो। यो केवल किनभने वर्डप्रेस लामो समयदेखि ब्लूहोस्ट सिफारिस गर्दै आएको छ। स्थापना प्रक्रिया एकदम सजिलो छ, दर सस्तो छ, र सेवा २//24 समर्थनको साथ आउँदछ। यदि यो तपाइँको पहिलो ब्लग हो भने पनि, निलो होस्ट छनौट गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
तपाईंको ब्लग सेट अप गर्नुहोस्
यदि ब्लूहोस्ट तपाईको होस्टिंग प्रदाता हो भने तपाईलाई WordPress स्थापना गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। चिन्ता नलिनुहोस् यदि तपाईंसँग कुनै प्राविधिक छ भने समस्या। तपाईं सजीलै प्रत्यक्ष ग्राहक समर्थन प्राप्त गर्नुहुनेछ। एकचोटि तपाईंले यो स्थापना गर्नुभयो, अर्को चरण भनेको डिजाइन विषयवस्तु छनौट गर्नु हो। सेट अप प्रक्रिया धेरै सजिलो छ। ब्लूहोस्टसँग प्रक्रियाको लागि निर्देशनहरू छन्।
तपाईं हजारौं थिमहरूबाट छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं निश्चित तिनीहरूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईंले यो पाउनुहुनेछ। तपाईंको ब्लगमा कार्यक्षमता थप्न, तपाईं केहि थप प्लगइनहरू थप्न सक्नुहुनेछ। प्लगइनहरू थपेर, तपाईं आफ्नो ब्लग सुविधा धनी बनाउन सक्नुहुन्छ।
एक व्यक्तित्व सिर्जना गर्नुहोस्
तपाइँको दर्शकलाई के मा रुचि छ तपाइँलाई कसरी थाहा छ? ठिकै तरिकाले यो जान्नको लागि उत्तम तरिका भनेको तपाईले केलाई रूचि राख्नु भएको छ ध्यान दिनुहोस्। हुनसक्छ तपाईले राजनीतिमा सामग्री खोज्नु भएको छ तर तपाईले खोज्नु भएको कुरा फेला पार्न असफल हुनुभयो। अब तपाईं हराइरहेको सामग्री सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। राजनीतिमा रुचि राख्ने व्यक्तिको रूपमा, आफैंको लागि सामग्री सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
यस रणनीति अनुसरण गर्नुहोस् यदि तपाईं प्रभावकारी सामग्री सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ। यदि सामग्री व्यक्तिगत रूपमा सन्तोषजनक छ भने, यसले तपाईंको श्रोतालाई पनि सन्तुष्ट पार्दछ।
तपाईंको दर्शक कहाँ पर्दै छ जान्नुहोस्
वेबसाइट सामग्री खाली ठाउँमा अवस्थित छैन। तपाईंको लक्ष्य अद्वितीय सामग्री सिर्जना गर्नु हो; तर वास्तविकता यो हो: तपाईंको दर्शकले पहिले नै सोशल मिडिया प्रयोग गर्दैछ, विभिन्न फोरमहरूमा संलग्न भईरहेको छ र अन्य ब्लगहरू पढिरहेको छ। यदि तपाईंलाई थाँहा छ कि तपाईंको दर्शक पहिले नै झुण्डिरहेको छ भने, तपाईं सजिलैसँग पाउन सक्नुहुनेछ तपाईंको दर्शक वास्तवमै के मा रूचि राख्दछ।
थिंकप्रग्रेस.अर्ज, पोलिटिको.कॉम, टकि Talking्गपोइन्ट्समेमो.कॉम र नेशनलरेभ्यु.कटम केहि राम्रा राजनीतिक ब्लगहरू हुन्। यी केवल केही उदाहरणहरू छन्। तपाईं यी साइटहरूमा भ्रमण गरेर तपाईंको दर्शकहरूसँग संलग्न हुन सक्नुहुन्छ। साथै, अनलाइन छलफल साइटहरू भ्रमण गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस्, यी ती व्यक्ति हुन् जसका लागि तपाई लेख्न लाग्नु भएको छ। यो तपाइँको मनोवृत्ति मानिसहरूलाई साझा गर्ने उत्तम तरिका हो जुन तपाइँले सोच्नुहुन्छ जस्तो सोच्नुहुन्छ।
सदाबहार लेखहरू लेख्नुहोस्
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ केहि लेखहरू लेख्नुहुन्छ जुन समयको साथ पुरानो हुँदैन। यी लेखहरू छन् जुन सँधै पाठकहरूलाई आकर्षित गर्दछ। यी लेखहरू पाठमा आधारित र लामो-फारम हुनुपर्छ। राजनीतिमा असंख्य महान् पुस्तकहरू छन्। यी पुस्तकहरूको केही समीक्षा लेख्नुहोस्। तपाई राजनीतिमा क्लासिक निबन्ध पनि समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ।
वर्षौंको अवधिमा धेरै पुस्तकहरू लोकप्रिय भइरहेका छन्। तपाईंको ब्लगमा यी पुस्तकहरू छलफल गर्नुहोस्। अन्य लामो फारम लेख लेख्दा, निश्चित गर्नुहोस् कि ती जानकारीपूर्ण छन्। यी लेखहरू तपाईंको ब्लगको मुख्य फोकस हुनुपर्छ।
राजनीतिमा रुचि राख्ने धेरै व्यक्तिहरू पनि समाचार जाकिज हुन्। त्यसोभए, यदि तपाइँ सामग्री टाइप गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले केहि नयाँ पाठकहरू पाउनुहुनेछ। एक घटनाको बखत, समाचार लेखहरूले खोज मात्रा बढाउन सक्दछन्, जबकि छोटो अवधिमा। यी लेखहरू लेख्नु भनेको केही पाठकहरूलाई समात्नको लागि प्रभावकारी तरीका हो।
यदि तपाईं नयाँ घटनाहरू वा वर्तमान घटनाहरूको बारेमा लेख्नुहुन्छ भने, प्रतिस्पर्धा कम हुनेछ। यस क्षेत्रमा ज्ञानको आधार तुलनात्मक रूपमा सानो छ, र त्यसैले तपाईंसँग आफ्नो स्वाद थप्ने अवसर छ। यस रणनीति प्रयोग गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
तर समाचार प्रकारका लेखहरूमा नकारात्मक प्रभाव हुन्छ। धेरै छोटो समयमा उनीहरूले लोकप्रियता गुमाए। यदि व्यक्ति आज कुनै घटनामा ज्यादै रुचि राख्छन् भने, तिनीहरूले केहि दिन पछि पूरै उत्साह हराउनेछन्। त्यसोभए, तपाईले सँधै सदाबहार लेखलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।
प्रत्येक अनुभवी ब्लगरलाई थाहा छ कि ब्लगि inमा प्रगति रैखिक छैन। यो तपाईंले के गरिरहनु भएकोमा राति पागल प्रगति नगर्ने कुरा हो। पाठकहरूको संख्या निराश छ भने पनि हार नमान्नुहोस्। मात्र लेख्न जारी राख्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईको ब्लगमा सँधै नयाँ सामग्री छ। याद गर्नुहोस्, सबै महान उपलब्धिहरूले समय लिन्छन्।
Design डिजाइन विद्यार्थीहरूका लागि टाइपोग्राफी सुझावहरू
शुरुवातकर्ताहरूको लागि ब्लगिंग विशेषज्ञहरूको प्रभावकारी सल्लाहहरू